I-plug ye-AMP ene-AMP Carousel Slider - TO
I-plugin ye-AMP enesilayida se-AMP carousel
Izilayida ze-AMP carousel zakhiwa ngokuzenzakalela kusuka kuzo zonke izithombe ezisendaweni yombhalo we-athikili (endaweni ye-'itemprop = ArticleBody ' ).
<amp-carousel> -Ukuhlanganiswa kweSlider
I-Accelerated Mobile Pages Generator idala ngokuzenzakalela i-AMP carousel isebenzisa ithegi ye-'amp-carousel 'uma kunesithombe esingaphezu kwesisodwa sendatshana endaweni ye-athikili!
I-carousel ye-AMP ingena esikhundleni sesithombe sendatshana esijwayelekile ekhasini le-AMPHTML.
Esikhundleni se-carousel ye-AMP, kukhonjiswa kuphela isithombe sendatshana esilula noma indawo imane ihlale ingenalutho.
Izithombe eziku-carousel ye-AMP zinikezwe amazwibela. Izimfanelo ze- <img> tag 'alt =' ne 'title =' zithathwe ekhasini lokuqala njengemibhalo. Uma lezi zimfanelo zingachaziwe ekhasini lokuqala, i-Accelerated Mobile Pages Generator isebenzisa ithegi ye- <Title> ye-athikili.